बिरालोको जुँगा | सृष्टि या संयोग?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन कन्नडा किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुभेल वारे-वारे शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
घरपालुवा बिरालो प्रायः दिउँसो सुत्छ अनि राती जागा रहन्छ। यसको जुँगाले विशेषगरि अँध्यारोमा नजिकैको वस्तु पत्ता लगाउँछ जसले गर्दा बिरालोले सजिलै सिकार पक्रन सक्छ।
विचार गर्नुहोस्: बिरालोको जुँगाको जरा तन्तुसित जोडिएको हुन्छ। यस तन्तुमा विभिन्न नसाहरू जोडिएका हुन्छन्‌ जसले मस्तिष्कसम्म जानकारी पुऱ्याउने काम गर्छ। यी नसाहरू यत्ति संवेदनशील हुन्छन्‌, यसले हावा चलेको जानकारीसमेत मस्तिष्कलाई दिन्छ। त्यसैले बिरालोले कुनै कुरा नदेखे तापनि नजिकैको चीजबीज पत्ता लगाउन सक्छ। यो विशेषगरि बिरालोलाई अँध्यारोमा काम लाग्छ।
बिरालोको जुँगा असाध्यै संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले कुनै वस्तु अथवा सिकार कहाँ छ र कतातिर जाँदै छ भनेर थाह पाउन त्यसले आफ्नो जुँगा चलाउँछ। प्वालबाट छिर्नुअघि त्यो कत्रो छ भनेर बिरालोले जुँगाद्वारा थाह पाउन सक्छ। यसबारे दी इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका-ले यसरी मानिलिएको पाउँछौं, “हुन त हामीलाई बिरालोको जुँगाको कामबारे थोरै मात्र थाह छ। तर यतिचाहिं थाह छ कि बिरालोको जुँगा काटियो भने केही समयको लागि त्यो असक्षम हुन्छ।”
वैज्ञानिकहरूले बिरालोको जुँगाको नक्कल गरेर वरिपरिको अवरोधहरू पत्ता लगाउने क्षमता भएको रोबट डिजाइन गरिरहेका छन्‌। यस्तो क्षमतालाई सेन्सर भनिन्छ भने रोबर्टमा भएको सेन्सरलाई चाहिं इ-विस्कर भनिन्छ। यो सेन्सर आधुनिक रोबट इन्जिनियरिङमा र शरीरका नक्कली अङ्गहरू बनाउन व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नु बेस हो भनेर क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अलि जाभेले बताए।
तपाईंको विचार कस्तो छ? बिरालोको जुँगा क्रमविकासको उपज हो या सृष्टि? (g15-E 04)
पाठ ४: चोर्नु हुन्‍न
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प ब्यूँझनुहोस्! जुलाई २०१५ | स्वस्थ रहन ५ वटा तरिका अपनाउनुहोस्